Okumele ukwazi ngoMthetho Wodlame Lwasekhaya - Bayede News
Okumele ukwazi ngoMthetho Wodlame Lwasekhaya
Ngeke esawubona umvuzo wemizamo yakhe
KUNOMTHETHO ohlinzeka abahlukunyezwa ngokushaywa, ngenkulumo, nangokocansi emakhaya. Lo mthetho ubizwa ngoMthetho woDlame lwaseKhaya, OkuwuMthetho 116 we-1998.
Udlame lwasekhaya luhlukumeza abantu abadala kanye nezingane ngokufanayo. Umhlukumezi kungenzeka kube ngowesilisa noma ngowesimame ekhaya. Lo mthetho uhlinzeka zonke izinhlobo zobudlelwane, ezinjengezabantu abashadile (nalabo abashada umshado wesintu), noma abantu abangashadile kodwa behlala ndawonye. Kokunye kuba abanobudlelwano noma asebecelene umshado noma abahlala ndawonye endlini eyodwa abanobudlelwano obunjengomfowabo nodadewabo noma abantu abadala.
Kuvamile ukuba abantu badidanise noma baphambanise lolu hlobo lomthetho ngenxa yezimo abazithola bengaphansi kwazo. Ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuba kugcizelelwe ukuthi kumele bucace bha ubudlelwano basekhaya (domestic relationship) ukuze kukwazeke ukuthi ngempela kuyilo na icala elingena ngaphansi kwenkantolo edalelwe loluhlobo lwamacala.
Okunye okubalulekile ngaphambi kokushushiswa noma okubhekwa kakhulu kulamacala indaba yokuba ikhaya lapho kwenzeke khona leli cala lidinga ukuba umuntu ahambe ibanga noma lisendaweni okukhona kuyo inkantolo okubikwa kuyo amacala okuthiwa iJurisdiction.
Kumele ukubike emaphoyiseni ikakhulukazi uma ushayiwe walinyazwa noma kwanezinsongo. Kepha umphakathi kumele ukwazi ukuthi kunenkantolo edalelwe loluhlobo lwamacala abizwa ngeDomestic Violence Court lapho umhlukunyezwa abika khona ebese ecela incwadi yokuvikeleka ebizwa ngeprotection order.
Kubalulekile ukuthi abantu abanalezi zinkinga bakuqonde ukuthi lezinkantolo azikufune mali ngaphandle uma uzokwenzelwa ummeli wakho. Noma sikuveza ukuthi lezi zinkantolo ngezamahhala akukho okudingwa kukhokhwe abazovula amacala, kepha akusho ukuthi kumele kuhanjiswe noma yimaphi amacala ngisho nalawo angahlangene nazo.
Kumele ube nesiqiniseko njengomsolwa ukuthi ubhala konke okuphathelene nalolu hlobo lwamacala hhayi okunye. Kumele njengomhlukunyezwa nommangali ukuqondisise ukuthi ukubika enkantolo ebekelwe lamacala kukunikeza maphi amalungelo nakuphi ukuvikelela.
Uma ufaka isicelo noma ufaka leli cala kule nkantolo usuke ucela incwadi yokuvikeleka iProtection Order, nokuyincwadi okumele imelane nokuhlukunyezwa kwakho. Le ncwadi uyithola uma usugcwalise amafomu
okufaka lesisicelo lapho kuwona ochaza kabanzi ngezehlo ezikwenze wabona ukuthi uyahlukunyezwa.
Uma usuwagcwalisile lamafomu akusho ukuthi ngaleso sikhathi uthola lencwadi yokuvikeleka, kusamele udaba luhlaziywe kabanzi yiMantshi esebenzela leyonkantolo ebese ithatha isinqumo sokuthi uyayithola lencwadi kepha eyesikhashana (Interim Protection Order) noma uthola incwadi ebiza ummangalelwa ukuba azochaza kabanzi (Notice to Show Cause) nokuyincwadi evamise ukukhishwa ngenxa yokungacaci kahle kodaba lwakho lokuhlukunyezwa okanye kwesinye isikhathi basichithe isicelo sakho (Dismissal of Application) ngenxa yokungaveli nhlobo izimpawu ezidingwa yilomthetho ukuze kugcwaliseke ukuba uhlukunyezwe udlame lwasekhaya.
Uthini umthetho ngabadala abaqapha abazukulu
Okubalulekile ukuba uma usuyitholile lencwadi yesikhashana okanye yokugcina (Final / Confirmed Protection Order) kubalulekile ukuthi ucele amaphoyisa akulekelele ekumnikeni (service) ummangalelwa incwadi.
Uyachazeleka nangokuboshwa kukammangalelwa uma engafikanga noma uma ephambane (violated) nalesisinqumo seNkantolo.
Khumbula ukuthi njengoba kunguwena ofake lesi sicelo akusho ukuthi uMantshi umele wena kulelicala. Umele ukunizwa nobabili athathe isinqumo ngakho ke uma ubona ukuthi uzohluleka ukuchaza kabanzi ikakhulukazi kwezomthetho ngoba akulula, cela ummeli akumele noma akulekelele kulolu daba luze lufike esiphethweni.
Yazi ke ukuthi inkantolo akuyona indawo yokuhlaziya izinkinga zabathandanayo ngombangiswano ngakho ungasimoshi isikhathi senkantolo okanye sikammangalelwa ngokuqamba amanga ngoba ngokwalomthetho obhalwe ngaphezulu inkantolo igunyaziwe ukuba ikukhokhise izindleko zabammeli bakammangalelwa uma kuvela ngokusobala ukuthi wena ubuzenzela nje ngoba ufisa ukulaya noma ukuhlukumeza omunye umuntu.
Masizondle ngolwazi njalo singaphezi. Sizobuya ngesonto elizayo siqhubeke ngayo eyoDlame lwasemakhaya.
U-Advocate Hlengiwe Mkhasibe, ungumsunguli nomqondisi weBM Legal Consultants. Umsebnzi omkhulu ukufundisa ngezomthetho ukuze abantu bathole kalula usizo lwezomthetho; lokhu kuwukuhlomisa nokwakha isizwe. Usebenze kakhulu neziteshi ezisakazela umphakathi. Ugxile kakhulu emthethweni wezemindeni (Family Law), owezakhamuzi (Civil Law) nowezohwebo (Commercial Law). Njengamanje usebenza nommeli wezokubangwa komhlaba (Land Disputes).
nguNgqeshe Buthelezi Feb 22, 2018